War CUSUB oo laga helayo Sheekada Messi iyo Barcelona… (Maxaa soo kordhay?) – Gool FM
War CUSUB oo laga helayo Sheekada Messi iyo Barcelona… (Maxaa soo kordhay?)
(Barcelona) 02 Luulyo 2021. Madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta ayaa sii waday inuu u xaqiijiyo taageerayaasha kooxda, mustaqbalka xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi, ka ddib markii qandaraaska ciyaaryahanka uu si rasmi ah u dhacay labo maalmood ka hor.
Lionel Messi ayaa markii ugu horeysay xor ka noqday kooxda Barcelona, maadaama uu dhacay qandaraaska uu ku joogay garoonka Camp Nou, taas oo la macno ah in ayna kooxda awood u lahayn in ay u isticmaasho sawirkiisa ama magiciisa wax suuq geyn ah ama geeddi-socod ah.
Iyadoo ay taasi jirto, Joan Laporta ayaa weli kalsooni buuxda ku qaba in Lionel Messi uu qandaraaska u cusbooneysiin doono Barcelona isla markaana uu aqbali doono dalabka ay kooxda u soo bandhigayso.
Laakiin uma badna inay taasi dhacdo toddobaadkan sababtoo ah, maadaama uu Lionel Messi uu kala qeyb qaadanayo xulkiisa qaranka Argantina tartanka Copa America 2021.
Haddaba sida uu daabacay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain Joan Laporta ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Messi, wuxuuna yiri:
“Messi? Hawshu way socotaa. Wuxuu doonayaa inuu sii joogo, waxaan dooneynaa inuu sii joogo, waxaan ku soconaa raadinta qaaciido u shaqeysa labada dhinac.” Ayuu yiri Joan Laporta.
RASMI: Ku guuleystaha Koobkii Adduunka ee 2014, Toni Kroos oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah
Kooxda Dekaddaha oo guul weyn ka gaartay Heegan kulan qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League